Ukuntywiliselwa kwindalo kunye nedolophu ekufutshane
Eli gumbi leholide likhethekileyo lagqitywa ngo-2013 kwaye libekwe ngokufanelekileyo kwisitrato esithe cwaka kumbindi weKelbra, kumathambeka asemantla eenduli zeKyffhaeuser ikunika ithuba elifanelekileyo lokuva i "Goldene Aue" .
Le ndlu yeholide ekhethekileyo yagqitywa ngo-2013 kwaye yayisetyenziselwa ukuba yinxalenye yokwenziwa kweqhosha langaphambili. Indawo ijikelezwe buhlaza kwaye iphuculwe ngumbono wentaba yaseKyffhaeuser.
Umbindi wesixeko ubekwe ngokufanelekileyo kumgama ongama-200 m wokuhamba kwaye unikezela ngeendawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neendawo zokuthenga apho ivenkile yokubhaka, iposi, ibhanki kunye nevenkile enkulu inokufumaneka.
Ngaphandle kweendawo zebarbeque kunye nebala lokudlala kwindawo enkulu evulekileyo zifumaneka simahla kwiindwendwe zethu (ezincinci).
I-Kelbra ibekwe kwindawo ephawulekayo yendalo emazantsi entaba iKyffhaeuser, kanye ecaleni kwechibi iKelbra. Indawo yayo enomtsalane ikumema ukuba uphumle, uzilolonge kwaye usebenze ngokwasemzimbeni.
Iindawo ezininzi ezinomtsalane zembali ezifana nepalatinateTilleda yakudala, iPanorama Museum of Fine Arts, Kyffhaeuser castle kunye nomqolomba weBarbarossa yindawo nje yokulahla ilitye kwaye indalo ejikelezileyo ibonelela ngobume bekarstic obukhethekileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa.
I-Kelbra ibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zegastronomy, isidlo esonwabileyo kunye nohlobo olwahlukileyo lobubele. Yeyona ndawo ifanelekileyo yohambo lokuya eHarz, Kyffhaeuser kunye neGoldene Aue.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kelbra (Kyffhäuser)